दुई कुख्यात सुदखोर विरुद्ध ३३ उजुरी दर्ता ! - Kantipath.com
प्रहरी हिरासतमा रहेका सर्लाहीका कुख्यात सुदखोर रामबाबु राय यादव विरुद्ध अहिलेसम्म २२ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ।
यादवमाथि ५ अर्ब ठगीको आरोप, गृहमार्फत छानबिन गरिँदै
ऋण लगानी गर्दा ठगी गरेको आरोपमा २३ पुसमा पक्राउ परेका यादव विरुद्ध २२ वटा उजुरी दर्ता भएको जिल्ला सर्लाही प्रहरीले जनाएकाे छ ।
आईजीपी खनालको ठाडो आदेश : १५ सय जनाको घर जग्गा कब्जा गर्ने राजपा नेता यादव पक्राउ !
‘अर्का आरोपी सञ्जय रौनियारविरुद्ध हालसम्म ११ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरी आउने क्रम जारी छ।’ उनीहरु विरुद्ध ठगी अभियोगमा कारबाही अघि वढाइएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
पीडितको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका नेकपा सर्लाहीका नेता कमल बुढाथोकीले यादव र रौनियार विरुद्धको उजुरी लेख्न केही वकिलले आनकाकानी गरेको बताए।
‘सुरुमा पीडितको पक्षमा वकिलहरुले उजुरी लेख्नसमेत मानेका थिएनन्,’ बुढाथोकीले भने, ‘उजुरी लेख्न पनि माथिबाटै दबाब दिनुपर्यो। अहिले भने उजुरी लेख्न थालेका छन्।’
रायको बरहथवा नगरपालिका १० सीतापुरस्थित घरमा प्रहरीले एकसाता अघि छापा मारेर ऋण लगानी गर्दाका महत्वपूर्ण कागजात बरामद गरेको थियो।
यादव र सञ्जय रौनियारले मिटर व्याजको माध्यमबाट ठगी गरेको भन्दै पीडितले दुई साताअघि गृहमन्त्रालयमा आएर आफ्ना गुनासो सुनाएपछि प्रहरीले यादव र रौनियारमाथि अनुसन्धान अघि वढाएको हो।
प्रहरीले खोजी गरेपछि रौनियार भने फरार छन्।
यादव र रौनियारले ऋण प्रवाह गर्दा दिएको रकम भन्दा कयौँ गुणा बढीको कागज बनाई उठिवास लगाएको भन्दै पीडितले छानविन गरी कारबाहीको गर्न माग गर्दै उजुरी गरेका हुन्।
यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का केन्द्रीय सदस्य हुन्।
रौनियारको सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट लगायतका जिल्लामा ७÷८ अर्बको कारोबार रहेको अनुमान छ। यादव को ३ अर्ब भन्दा बढीको कारोबार छ।
यादवले प्रवाह गरेको ऋणको कारण साविक मुर्तियाको १५० परिवारको एउटा माझी बस्ती नै बिस्थापित भएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस् – यस कारण पीडितहरूले उजुरी लेखिदिने वकिलसमेत पाएनन्
साहुकार यादव र रौनियारविरुद्ध उजुरी दिन शुक्रबार मात्रै दुई सय पीडित जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पुगे, तर वकिलले जाहेरी लेख्न नमानेपछि निराश हुँदै घर फर्किए
राजपाका केन्द्रीय सदस्य तथा खुंखार साहुकार रामबाबु राय यादव र तत्कालीन नयाँ शक्तिका प्रदेश सभा उम्मेदवार सञ्जय रौनियारबाट चरम शोषणमा परेका सर्लाही र आसपासका पीडितहरूले प्रहरीमा जाहेरी लेखिदिने वकिलसमेत पाएका छैनन् । यादव पक्राउ परेपछि पीडितहरू न्याय पाउने आससहित उजुरी दिन मलंगवास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन् । तर, सर्लाहीका वकिलहरू यादव र रौनियारविरुद्ध पीडितको उजुरी लेखिदिन तयार छैनन्, बहाना बनाएर पन्छिरहेका छन् ।
‘हामीले जिल्लाका धेरै वकिलसँग सम्पर्क गर्‍यौँ । कसैले व्यस्त छु भ्याउँदिनँ भन्नुहुन्छ । कोही भने बुढो भइयो, सल्लाह सुझाबसम्म दिन सकिन्छ, लेख्न त गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ,’ सर्लाहीका पीडित रवीन्द्र कुशवाहले भने, ‘जाहेरी लेखाउने वकिल नपाउँदा प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुन सकेको छैन ।’ बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट घर फर्काइएका पीडितहरू शुक्रबार पनि उजुरी दर्ता नभएपछि निराश भएर फर्किएका छन् ।
लाख ऋण दिएर करोडको कपाली तमसुक बनाउँदै ऋणीको जग्गा आफ्नो नाममा गराउने यादव र रौनियार विरुद्ध जाहेरी दिन शुक्रबार दुई सय १० पीडित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । रामबाबुपीडित एक सय ५० र सञ्जयपीडित ६० जना थिए ।
अर्का पीडित रामबहादुर घिसिङले पनि जाहेरी लेखिदिने वकिल नपाउँदा उजुरी दर्ता गर्न नपाएको बताए । ‘साहुकारविरुद्ध जाहेरी लेखिदिनुपर्‍यो भन्दा कतिपय वकिलले कानुनी व्यवसाय नै छाडिसकेको जवाफ दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनबाट सहयोग भए पनि वकिल नपाउँदा समस्यामा परेका छौँ ।’
बिहीबार प्रहरीले वकिलबाट जाहेरी लेखाई प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन पीडितहरूलाई भनेको थियो । जाहेरीमा वकिलको नाम र दर्ता नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । नाम र दर्ता नम्बर सार्वजनिक हुँदा साहुकारको निशानामा पर्ने डरले वकिलहरू हच्किएका हुन् ।
केही पीडितले बार एसोसिएसन सर्लाहीका अध्यक्ष दिलीप झालाई नै उजुरी लेखिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, उनले पनि व्यस्त भएकाले लेख्न नभ्याउने भन्दै पन्छिएका थिए । तर, आफूले पीडितलाई पछि आउन भने पनि दोस्रोपटक फोन नआएको झाले नयाँ पत्रिकासँग बताएका छन् ।
‘जाहेरी लेखिदिन भन्दै मलाई पनि भनिएको थियो । मैले व्यस्त छु, समय मिलाएर आउनुस् भनेको थिएँ । तर, दोहोर्‍याएर फोन आएन,’ झाले भने, ‘पीडितले आग्रह गरिसकेपछि वकिलले जाहेरी लेख्दिन भन्ने नै हुँदैन । सर्लाही बारमा ४५ सदस्य हुनुहुन्छ । पेसा नै त्यही भएपछि जाहेरी लेख्दिन भन्न पाउनुहुन्न ।’ पीडितले नै आवश्यक कागजात नपुर्‍याएकाले कम उजुरी परेको हुन सक्ने उनले बताए ।
दिनमा एउटा मात्रै जाहेरी दर्ता
साहुकार रामबाबु र सञ्जयबाट सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, बारा र पर्सालगायत जिल्लाका एक हजार पाँच सय पीडित छन् । तर, उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिन दिनमै दुई सयको डफ्फा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्दा एउटा मात्रै जाहेरी दर्ता भएको छ ।
शुक्रबार रामबाबुविरुद्ध सर्लाहीका एक पीडितको मात्रै जाहेरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वमणि पोखरेलले बताए । सुरक्षाका कारण उजुरीकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनले बताए । यसअघि बिहीबार पनि एकजनाको जाहेरी दर्ता भएको थियो । बुधबार गृह मन्त्रालयमै जाहेरी दर्ता गराएका सर्लाही बरहथवा–१ हजारियाका ६७ वर्षीय मिरुगन राय यादवको जाहेरी बिहीबार दर्ता भएको थियो ।
आइतबारसम्म ५०/६० जनाको जाहेरी दर्ता हुन सक्ने एसपी पोखरेलले बताए । ‘रामबाबु र सञ्जयविरुद्ध उजुरी दिन आज धेरै आउनुभएको थियो । कतिपयको कागजपत्र पुगेको थियो, तर बलियो प्रमाण नपुगेकाले जाहेरी कम पर्‍यो । आइतबारसम्म ५०/६० जनाले जाहेरी दिन सक्छन्,’ उनले भने । आफूहरूले सबै पीडितलाई जाहेरी दिन भनेको र सबै संकलन भएपछि अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाउने बताए । रामबाबु र सञ्जयविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत पनि छानबिन बढाउने तयारी छ ।
Previous Previous post: ‘पशुपतिनाथले बहुमतधारी नेकपालाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन्’ – कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
Next Next post: २५० किलोका आतकंकारी पक्राउ !
एमालेका पुर्व माओवादी एकै ठाउँ !